एजेन्सी– तपाईंलाई नुहाउने तरिका पनि गलत र सही हुन्छ भन्ने जानकारी छ ? तपाईंलाई लाग्दो हाे, यस्तो पनि कहीँ हुन्छ ? जसले जसरी पनि नुहाउँदा पनि के फरक पर्छ ? यदि यस्तो यो भने तपाईंको सोचाइ गलत हो । खानपिन र सुत्ने विशेष तरिकाजस्तै नुहाउने पनि एउटा सही तरिका हुन्छ । यदि तपाईंले यो तरिका अपनाउनु भएन भने प्यारालाइसिस अथवा ब्रेन स्ट्रोकको खतरा हुन्छ । त्यसैले कसरी नुहाउने भन्ने कुरा जान्नु अपरिहार्य छ ।
नुहाउने गलत तरिका
धेरै मान्छेहरू बाथरुम छिर्नेबित्तिकै सावर वा बाल्टीको पानी सिधै टाउकोमा खन्याउने गर्छन् । यो नुहाउने सबभन्दा गलत तरिका हो । यो तरिकाले नुहाएको खण्डमा स्ट्रोकलगायत अन्य समस्या पनि आउन सक्छ ।
हाम्रो शरीमा रक्तसञ्चार प्रक्रिया माथिबाट तल हुन्छ । यस अवस्थामा यदि तपाईं टाउकोमा सिधै चिसो पानी खन्याएर नुहाउनुहुन्छ, त्यस अवस्थामा टाउकोमा रगतका नली खुम्चिन्छ र रगत जम्न थाल्छ । त्यसैले नुहाउने बेला पहिले टाउकोमा पानी हालेर नुहाउने थाल्नु हुँदैन ।
नसा फुट्ने खतरा
टाउकोमा सिधै पानी खन्याउनाले हाम्रो टाउको चिसो हुन थाल्छ । यसले गर्दा मुटुले टाउकोतर्फ जोडसँग रगत पठाउनुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा हृदयाघात हुन सक्ने सम्भावना हुनुका साथै दिमागको नसा फुट्ने सम्भावना पनि बढेर जान्छ ।
खुट्टाबाट नुहाउन सुरु गर्नुहोस्
त्यसैले खुट्टाबाट नुहाउन सुरु गर्नु उत्तम उपाय हो । त्यसपछि जाँघ, शरीर, काँध हुँदै अन्तिमा टाउकोमा पानी खन्याउनु नुहाउने उत्तम उपाय हो ।
यो सबै गरिसकेपछि तपाईं सावरको पानी अथवा बाल्टीमा थापेको पानी सिधै शिरमा खन्याएर नुहाउन सक्नुहुन्छ । तर, यस प्रक्रियाका लागि जम्मा १ मिनेटमा मात्र समय लगाउनु उपयुक्त हुन्छ ।